खिम्ती-१ सञ्चालनको एक दशक पूरा | गृहपृष्ठ
Home बजार खिम्ती-१ सञ्चालनको एक दशक पूरा
हिमाल पावर लिमिटेडले यस वर्षलाई खिम्ती १ जलविद्युत् आयोजनाको सफल सञ्चालन भएको १ दशकको रूपमा मनाउने भएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बूट) पद्धतिअनुसार सञ्चालनमा ल्याएको यो पहिलो आयोजना हो । सन् २००० को असारदेखि हालसम्म यसले करीब ४ अर्ब यूनिट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको बताएको छ । यसको झण्डै शतप्रतिशत समय नै उत्पादनको लागि प्लाण्ट तयार अवस्थामा रहेको छ ।
कम्पनीले व्यावसायिक सामाजिक दायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ४ हजार ६ सय घरधुरीलाई विद्युत् आपूर्ति गरिसकेको छ । साथै ६ शय ३५ किलोवाट क्षमताको विद्युत्गृह सञ्चालनमा रहेको र यस कार्यक्रमअर्न्तर्गत थप ३ हजार ८ शय घरधुरीलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनी ४ शय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा रहेको छ । कम्पनीले ग्रामीण विद्युतीकरणका क्रममा सदस्यहरू नै स्वयं मालिक रहने गरी सम्पूर्ण संरचनाहरू ‘खिम्ती ग्रामीण विद्युत् सहकारी’ नामक संस्थालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यस प्रकारको सहकारी नेपालकै पहिलो हो । अमेरिका र बङ्गलादेशका ग्रामीण विद्युत् सहकारीहरूको नमूनाको आधारमा यो स्थापना गरिएको हो ।
कम्पनीले गत १ दशकमा दोलखा तथा रामेछापका धेरै विद्यालयहरूलाई सहयोग गरेको छ । कम्पनीले आयोजना क्षेत्रमा धेरै खानेपानी प्रणालीहरू, चर्पीहरू, कृषि तथा वनसम्बन्धी परियोजनाहरू, आयमूलक तालीमहरू, महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू तथा सिंचाई प्रणालीहरूलाई सहयोगसमेत गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई निर्वाह गर्दै आगामी दिनमा कम्पनीले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
सल्यानमा मध्यपश्चिम महोत्सव शुरु
‘लोपोन्मुख सम्पदाको संरक्षण गरौं, कृषि, ब्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरौँ ‘ भन्ने नाराका साथ बिहीवारदेखि सल्यानमा ‘मध्यपश्चिम महोत्सव २०६७’ शुरु भएको छ । महोत्सवको उद्घाटन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख धनराज रतालाले गरेका थिए ।
यही मङ्सिर १९ सम्म चल्ने सो महोत्सवमा १ सय ६२ वटा स्टल राखिएका छन् । उद्घाटनको अवसरमा सल्यान जिल्लामा प्रचलित रोपाइँ, लाखे, सिगारु, सोरठी, मयुर पङ्ख वनघारीलगायतका लोपोन्मुख नाचहरू प्रदर्शन गरिएका थिए । सल्यान जिल्लामा उत्पादित सुन्तला, अदुवा, खुकुरी, हलुवावेत, जडिबुटी, तरकारी, सल्यानी खुकुरीलगायतका स्थानीय उत्पादन प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । विश्वका होचा व्यक्तिका रूपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएका खगेन्द्र थापा मगरले महोत्सवको थप आकर्षा बढाएका थिए । महोत्सवमा राष्ट्रिय कलाकारहरूको प्रस्तुति तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रस्तरीय लोकदोहोरी प्रतियोगितालगायत कार्यक्रम रहेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ सल्यान मुख्य आयोजक, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ काठमाडौं र ब्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र ललितपुर आयोजक रहेको महोत्सवको मुख्य प्रायोजक सल्यान-रुकुम यातायात ब्यवसाय समिति र प्रवर्द्धकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड रहेको छ ।
। करीब ६० लाख रूपैयाँ खर्च लाग्ने महोत्सवमा हालसम्म ४० लाख रूपैयाँ सङ्कलन भइसकेको महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक हरिहर बुढाथोकीले जानकारी दिए । महोत्सव अवलोकनका लागि सल्यानलगायत छिमेकी जिल्ला दाङ, रोल्पा रुकुम, प्यूठान, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लाबाट दर्शक आउने क्रम जारी रहेको महोत्सव आयोजक समितिले जानकारी दिएको छ । महोत्सवमा जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणका लागि यातायातको सुविधासमेत उपलब्ध छ । धार्मिक, प्राकृतिक एवम् पर्यावरणीय पर्यटनको सम्भावना रहेको सल्यान जिल्ला एशियाकै उत्कृट रेसारहित अदुवा उत्पादन हुने क्षेत्र पनि हो । त्यसैगरी यहाँ सिमेन्टका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको खानी पनि रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । जिल्लामा पहिलोपटक आयोजना भएको यो महोत्सवले जिल्लाको पर्यटन पवर्द्धन र विकासमा टेवा पुग्ने जिल्लाबासीको अपेक्षा छ ।
समर र मनीषले जिते यामाहा राइडटेक च्यालेञ्ज-२
मङ्सिर ११, काठमाडौं । समर मानन्धर र मनीष श्रेष्ठ यामाहा राइडटेक च्यालेञ्ज- २ विजेता बनेका छन् । नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता मोरङ अटो वर्क्सले शनिवार राजधानीमा आयोजना गरेको सो प्रतियोगितामा ‘आरवान फाइभ’ तर्फसमर मानन्धर र ‘एफजेड’ तर्फमनीष श्रेष्ठले उपाधि जितेका हुन् । अब उनीहरू भारतको चेन्नईमा हुने ‘चेन्नई रेसिङ च्याम्पियनशिप २०११’ मा सहभागी हुनेछन् ।
सो प्रतियोगितामा आरवान फाइभतर्फबेञ्जामिन गौतमले फष्ट रनर अप र प्रशान्त तिम्सिनाले सेकेण्ड रनर अपको उपाधि जिते । यस्तै एफजेडतर्फकरण खतिवडा फष्ट रनर अप र विवेककुमार मण्डल सेकेण्ड रनर अप भएका थिए । उपाधिसँगै फष्ट रनर अपले नगद रू. २० हजार र सेकेण्ड रनर अपले नगद रू. १० हजार पाएका छन् । उक्त प्रतियोगितामा यामाहाको आरवान फाइभ र एफजेड मोटरसाइकलका ९३ जना चालकहरूले भाग लिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न भारतका व्यावसायिक रेसर फहाद खानले स्टण्ट प्रदर्शन गरेका थिए । सो अवसरमा सहभागीहरूलाई चालक कुशलताका बारेमा जानकारीसमेत दिइएको थियो । उल्लेख्य दर्शकहरूको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा डीजे सेसन, बी-बोइङजस्ता मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका निमित्त महा प्रबन्धक सूरज मानन्धरले युवाहरूलाई सेफ राइडिङका बारेमा जानकारी दिन सो कार्यक्रम फलदायी भएको बताए । यसअघि मोरङ अटो वर्क्सले गत वैशाख महीनामा यामाहा राइडटेक च्यालेञ्ज-१ को आयोजना गरेको थियो ।
सूर्य नेपाल गल्फ उपाधि सञ्जय लामालाई
एघारौँ सूर्य नेपाल वेष्र्टन ओपन गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि सञ्जय लामाले जितेका छन् । पोखराको हिमालयन गल्फ कोर्षमा शुक्रबार सम्पन्न प्रतियोगितामा उनले डिफेण्डिङ च्याम्पियन रवि खड्कालाई १० स्ट्रोकले पछि पार्दै उपाधि जितेका हुन् । तीन वर्षअघि मात्रै प्रोफेसनल गल्फमा प्रवेश गरेका लामाले उपाधिसंगै रू. ८० हजार नगद हात पारेका छन् ।
शुक्रबारको अन्तिम खेलमा उनले इभन पार ७३ खेल्दै उपाधि जितेका हुन् । उनले फ्रन्ट नाइनको दुइ, तीन र पाँचौ होलमा ‘बुगी’ तथा सातौँ होलमा ‘बर्डी’ खेलेका थिए । ब्याक नाइन अन्तर्गत उनले १२ औँ ‘होलमा बुगी र १३ औँ र १७ औँ होलमा बर्डीखेल्दै इभरन पार ७३ खेल्दै ४ ओभर २ सय ३३ स्कोर बनाए । गत वर्षा विजेता रवि खड्का १४ ओभर २ सय ३३ स्कोर बनाउँदै दास्रो स्थानमा रहे । उनले रू. ५१ हजार नगद प्राप्त गरेका छन् । त्यसै गरी गत वर्षका उपविजेता शिवराम श्रेष्ठले अन्तिम २ ओभर ७५ खेल्दै २ सय ३५ स्कोर बटुली तेस्रो भए । उनले रू. ४० हजार पुरस्कार पाएका थिए ।
प्रतियोगितामा उमेश नगरकोटी, राम थापा र सविन सापकोटा २० ओभर २ सय ३९ स्कोरसहित चौथो स्थानमा रहे । त्यसै गरी यलम्बरसिंह अधिकारी, मणि राई, जयराम श्रेष्ठ २१ ओभर २ सय ४० स्कोरमा संयुक्त रूपमा सातौँ स्थानमा रहेका थिए । एम्याच्योरतर्फ२ सय ५७ स्कोर बटुल्दै पुष्पराज बहाकले उपाधि जिते । समुन्द्र गिरी २ सय ६० स्कोरसहित उपविजेता बनेका थिए । सो खेलमा २८ प्रोफेसनल तथा १९ एम्यारच्योर गरी कुल ४७ जना खेलाडी सहभागी थिए । सूर्य नेपाल प्रमुख प्रायोजक तथा यति एयरलाइन्स सह- प्रायोजक रहेको सो प्रतियोगितामा रू. ३ लाख ८५ हजार बराबरको पुरस्कार राशी खर्च गरिएको थियो । सूर्य नेपालका ब्राण्ड म्यानेजर ईश्वर गौतमले प्रतियोगितका विजेतालाई पुरस्कृत गरेका थिए ।
पोखरामा मुस्ताङ म्याक्स
नेपालमा बनेको नयाँ मोडलको मुस्ताङ म्याक्स गाडीको पोखरामा ओपचारिक विक्री शुरू भएको छ । हुलास मोटर्स प्रालिले निर्माण गरेको मुस्ताङ गाडीको स्वरूप र मोडल परिवर्तन गरी ‘मुस्ताङ म्याक्स’ का रूपमा हिमालयन अटो वर्ल्डले पोखरामा विक्री शुरू गरेको हो । यस गाडीको मूल्य रू. १६ लाखदेखि १७ लाख ५० हजार सम्म रहेको हिमाल अटो वर्ल्डका सञ्चालक ध्रुवबहादुर थापाले जानकारी दिए । पहाडी बाटोमा उपयुक्त मानिने यो गाडी फोर हृवील र साधारण गरी १३ र ११ सीटमा उपलब्ध छ ।
विदेशी गाडीहरूको तुलनामा आफ्नै देशमा उत्पादित यी गाडीहरू सस्तो तथा कच्ची सडकमा उपयुक्त हुने हुदा पोखरा तथा पोखरा आसपासका दुर्गम क्षेत्रका बाटाहरूमा अत्यन्त लोकप्रिय रहँदै आएको कम्पनीको दाबी छ । मुस्ताङ ब्राण्डका गाडी यसअगाडि पनि पोखराबाट बाग्लुङ, बेनी र मुस्ताङमा ३ शयभन्दा बढी बिकिसकेको र ग्राहकको चाहनाअनुसार नयाँ मोडलको रूपमा मुस्ताङ म्याक्स बजारमा ल्याएको उनले बताए । गाडीमा २५४० सीसी इञ्जिन क्षमता रहेको छ । गाडीमा अटोमेटिक सीट बेल्ट, जाडाको कुहिरोमा टाढासम्म लाइट फाल्न सक्ने फग लाइट, उच्च क्षमतायुक्त इञ्जिनलगायतका क्षमता नयाँ गाडीमा रहेको विक्रेता थापाले जानकारी दिए ।
सिभिल बैङ्कको सेवा शुरु
सिभिल बैङ्कले शुक्रवारदेखि बैङ्किङ सेवा औपचारिक रूपमा शुरू गरेको छ । बैङ्कको मुख्य कार्यालय काठमाडौंको कमलादीस्थित क्लासिक कम्प्लेक्समा छ । यो मुलुकको ३० औं वाणिज्य बैङ्क हो । कुल २ अर्ब चुक्ता पूँजीमध्ये संस्थापकको ६० प्रतिशत तथा ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहने बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिशोर महर्जनले जानकारी दिए । बैङ्कका संस्थापक १ सय ४९ जना छन् ।
उनका अनुसार बैङ्कले अत्याधुनिक बैङ्किङ सफ्टवयेर टी-२४ प्रयोगमा ल्याएको छ । बैङ्क प्रविधको हिसाबले अत्याधुनिक हुने उनको दाबी छ । सानादेखि ठूला उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने एवम् कृषि पेशामा आबद्ध जनताका लागि सुलभ कर्जा प्रदान गर्ने बैङ्कको योजना रहेको उनले बताए । बैङ्कले लगानी तथा व्यवसायका लागि प्राविधिक सरसल्लाहसमेत प्रदान गर्ने बताएको छ । बैङ्कले यस वर्षभित्रै १० शाखा खोल्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कञ्जुमर डेभलपमेण्ट बेलचोकमा
नेपाल कञ्जुमर डेभलपमेण्ट बैङ्कले भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर-४ बेलचोकमा शाखा खोलेको छ । बैङ्कको यो पहिलो शाखा हो । बैङ्कले गत हप्तादेखि पोखराको न्यूरोडस्थित प्रधान कार्यालयबाट एटीएम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बैङ्कले गत माघ २२ गतेदखि औपचारिक रूपमा आफ्नो वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको थियो । बैङ्कको गत असोजमसान्तमा रू. २९ करोड ७५ लाख निक्षेप सङ्कलन तथा २८ करोड ६२ लाख कर्जा प्रवाह रहेको थियो । चालू आवको प्रथम त्रैमासमा रू. ५३ लाख ७४ हजार सञ्चालन नाफा गरेको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । बैङ्कले विप्रेषण तथा लकर सुविधासहित सम्पूर्ण आधुनिक बैङ्किङ सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
विराटचोकमा स्टेर्ण्र्डड फाइनान्स
स्टेर्ण्र्डड फाइनान्सले शुक्रवार धनकुटाको हिलेमा शाखा खोलेको छ । कम्पनीको यो दशौं शाखा हो । यही बिहीवार कम्पनीले मोरङको विराटचोकमा नवौं शाखा खोलेको थियो । विराट शाखाको मोरङ व्यापार सङ्घका सचिव भोला दुलाल तथा हिले, धनकुटा शाखाको उद्योग वाणिज्य सङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष लालचन्द गोङवाले उद्घाटन गरेका थिए ।
धनकुटा शाखा उद्घाटन गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष हिरण्यप्रकाश धरले ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको सानो पूँजीको सङ्कलन गरी यसै क्षेत्रका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी गरिने बताए ।
कम्पनली हाल ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा छ । कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब १८ लाख ८० हजार रहेको छ । निक्षेपमा सवा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले ३ सय ६५ दिन नै बैङ्किङ तथा एटीएम सुविधा समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
चाइना यूनियन पे-स्ट्यार्ण्र्डड चार्टर्ड सम्झौता
स्ट्यार्ण्र्डड चार्टर्ड बैङ्क नेपाल तथा चाइना यूनियन पेबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार स्ट्यार्ण्र्डड चार्टर्ड बैङ्कद्वारा सञ्चालित एटीएमबाट चाइना यूनियन पेको (सीयूपी) कार्डमार्फत नगद झिक्न तथा बैङ्कमा रहेको ब्यालेन्सबारे जानकारी लिन सकिने छ ।
हाल स्ट्यार्ण्र्डड चार्र्टर्डका काठमाडौं उपत्यकामा १६ तथा उपत्यका बाहिर ७ वटा एटीएम रहेका छन् । बैङ्कमार्फत चाइना युनियन पे कार्ड प्रयोग गर्न सकिने भएपछि पर्यटन वर्ष२०११ मा नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकलाई थप सुविधा पुग्ने बैङ्कद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
ग्लोबल बैङ्कको लाभांश पारित
ग्लोबल बैङ्कको शुक्रवार वीरगञ्जमा सम्पन्न चौथो वार्षिक साधारणसभाले शेयरधनीलाई पाँच प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय पारित गरेको छ । साधारणसभाले बैङ्कको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलिको संशोधन प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
सो अवसरमा बैङ्कका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैङ्कको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । साधारणसभामा प्रस्तुत विवरणअनुसार बैङ्कको हालसम्मको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ४७ करोड छ । बैङ्कले चालू आवको प्रथम त्रैमासमा रू. १५ करोड ५७ लाख सञ्चालन नाफा गरेको बताएको छ । बैङ्कका ११ अञ्चलमा २८ शाखा रहेका छन् भने बैङ्कको एटीएम सङ्ख्या ३५ रहेको छ ।
कार्बोनका थप २ नयाँ मोडल
कार्बोन मोबाइलको बिक्रेता एलाइड ट्रेड लिङ्कले वाइ-फाइ सुविधायुक्त के२५आई तथा दुई सिम प्रयोग गर्न सकिन के५१४ मोडल नेपाली बजारमा ल्याएको छ । काडमाडौंको पाको, न्यूरोडमा सर्भिस सेण्टर रहेको एलाइड ट्रेड लिङ्कले मासिक १० हजारभन्दा बढी कार्बोन मोबाइल विक्री गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ । कम्पनीले निकट भविष्यमा नारायणगढ तथा इटहरीमा पनि र्सर्भिस सेण्टर खोल्ने योजना रहेको जानकारी दिएको छ ।
के२५आई मोडलको सेटमा वाइ-फाइका अतिरिक्त क्यूडब्लूइआरटीके कीप्याड, २ मेगापिक्सेल क्यामरा, वायरलेस एफएम, ब्लूटुथ तथा ८ जीबीसम्मको मेमोरी कार्ड राख्न सक्ने सुविधा छ । त्यसैगरी के५१४ सेटमा दुइवटा सिम कार्ड प्रयोग गर्न मिल्ने सुविधाका साथै अडियो/भडियो प्लेयर, २ मेगापिक्सेल क्यामरा, जीपीआरएस, ब्लूटुथ तथा ८ जीबीसम्मको मेमोरी कार्ड राख्न सकिने सुविधा छ ।
‘सहकारीको कर्तव्य र दायित्व सरकारले तोकोस’
सहकारी संस्थाहरूको कर्तव्य र दायित्व सरकारले तोक्नुपर्ने नेपाल सरकारका सहसचिव एवम् साना जलविद्युत् विकास समितिका निर्देशक आत्मकृष्ण श्रेष्ठले बताएका छन् । सहकारी संस्था नाफामुखी हुँदै गएकाले सेवामूलक क्षेत्रमा समेत सहकारीले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
काठमाडौंको नयाँबजारस्थित इण्डेक्स वचत तथा सहकारी संस्थाको पहिलो वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । सहकारीको शेयर पूँजी २५ लाख ७० हजार ४ सय रहेको संस्थाका सचिव मनोज श्रेठले जानकारी दिए । सहकारीमा जम्मा १ सय ८५ जना शेयर सदस्य रहेका छन् । निकट भविष्यमै खुत्रुके वचत, विप्रेषण , बीमालगायतका कार्यक्रम ल्याउने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
एमिटी सहकारीको कारोबार शुरू
एमिटी सेभिङ एण्ड क्रेडिट को- अपरेटिभले शनिवारदेखि औपचारिक कारोबार थालेको छ । काठमाडौँको पुतलीसडकमा रहेको यस सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका बैङ्किङ वित्त विभागका कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पँगेनीले उद्घाटन गरे । संस्थामा हाल १ सय ५० जना सदस्य रहेका छन् । सहकारीको चालू पूजी रू. ३१ लाख रहेको छ । साधारण, कर्मचारी, गृहिणी, बालबालिका, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, नाफामुखी र साना उद्यमी गरी जम्मा ८ वटा बचत योजनाहरू अघि सारेको यस संस्थाले मुद्दती योजनामा ६ महीनादेखि ५ वर्षसम्म १२ देखि १६ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने बताएको छ । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, कृषि, तथा व्यापारमा लगानी गरी सदस्यहरूलाई उच्चतम प्रतिफल दिने यस संस्थाको लक्ष्य रहेको बताएको छ ।